LEGO ကိုအရင်ကြည့်ပါ Marvel တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man
20 / 07 / 2021 20 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 329 Views စာ0မှတ်ချက် 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, .ရာဝတီ, Disney+, Hulkbuster ပါ, သံမဏိလူသား, Lego, Lego မှ marvel, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Marvel, reviews, Watcher, တိုနီ Stark, Valkyrie, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, YouTube ကို
၏ပထမ ဦး ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ် Lego Marvel တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man သီးသန့်အသေးစားရုပ်ပုံများသုံးပုံကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုရန်သြဂုတ်လမတိုင်မီကအွန်လိုင်းတွင်ရှိနေပြီးဖြစ်သည်။
YouTuber တ ကျောက်စိမ်း ၏အစောပိုင်းမိတ္တူလုံခြုံခဲ့သည် Disney+ ရဲ့တူညီတဲ့ကနေဒါလက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ထံမှလည်းသတ်မှတ်ထားသည် st ပြီးပြီartရောင်းချခြင်း ဒီနွေရာသီပါပဲ Lego Star Wars မှာသူတို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ချိမတိုင်မီနှစ်ပတ်နီးပါးစုံ LEGO.com နှင့် Lego Stores ။
ယခုသူသည်အစောပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုတင်ခဲ့သည် 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man အရောင်အသွေးစုံလင်လှတဲ့ Hulkbuster ပုံစံ mech နှင့်၎င်း၏တိုနီ Stark၊ Valkyrie နှင့် The Watcher minifigures မှဘာမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတာကိုတစေ့တစောင်းကြည့်ရင်း .. အကယ်၍ အားလုံးသည် အကယ်၍ ဘာဖြစ်ခဲ့လျှင် ... ? Tony Stark သည် Thor အစား Sakaar တွင်ကျရောက်ခဲ့သောစကြဝuniverseာကိုမြင်ယောင်လိမ့်မည်။
“ သင်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည်ကိုငါသိ၏။ နောက်တစ်ခုက Iron Man၊ နောက် Hulkbuster ပဲ” ဟု Ashnflash ကပြောသည် 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man နှင့်များစွာသော Marvel mechs (ဒီနွေရာသီအပါအဝင်) 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper) ။ ဒါပေမယ့်ဒီဒီဇိုင်းနှင့်၎င်းရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကထူးခြားဆန်းပြားပါတယ်။ ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကလည်းအရမ်းကောင်းတယ်။
၎င်းသည်ပိုများလာသော Hulkbuster-style အစုံများထဲမှနောက်ထပ်အရစ်ကျ - အနည်းဆုံးစက္ကူပေါ်တွင်ကြည့်လျှင်တော်တော်ကောင်းဖွယ်ကောင်းသည်။ ဘယ်အချိန်မှာမင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာဖွေနိုင်မှာလဲ 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man သြဂုတ်လ 1 ရက်နေ့တွင်လွှတ်တင်
← Lego Marvel 76178 Daily Bugle ပြန်လည်သုံးသပ်မှု - ဤသတင်းထောက်ထံမှသတင်းကောင်း မှလွဲ၍ ဘာမျှမရှိပါ
Lego Ideas Sailing Ship Adventure GWP သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်ကောလဟာလသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည် →